သည်ဆိုဒ်သည် စာပေချစ်သူ အဖွဲ့ အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို guestbook စာမျက်နှာတွင်
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများ၏အချိန်များ ကိုသိလိုလျှင် သိလိုသည့် နိုင်ငံအပေါ်သို့ 
ထောက်ပြီး click နှိတ်လိုက်ပါ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကူးတို့ဆိပ် ရပ်ကွက်၊ မေတ္တာမွန်ဝင်း၊ မေတ္တာမွန်ဂိုဒေါင်တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁ နာရီ မိနစ် ၄၀ အချိန်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။ အဆိုပါမီးလောင်မှုမှာ ၀ါယာရှော့မှတစ်ဆင့် ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ ယမ်းစိမ်း၊...
လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေ နှစ်ဦး လိုင်စင် သုံးနှစ် ပိတ်ခံရ ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ နေပြည်တော် တရားလွှတ်တော်ချုပ်က မန္တလေးမှ ရှေ့နေ နှစ်ဦးကို ရှေ့နေကျင့်ဝတ် တာဝန် ပျက်ကွက်သည်ဟုဆိုကာ ရှေ့နေလိုင်စင် သုံးနှစ် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း...
အွန်နရီနှင့် တစ်နှစ်အတွင်း သွင်းဂိုးစံချိန် တူညီသွားခြင်း အတွက် ဗန်ပါစီ ဂုဏ်ယူနေ သီအာရီ အွန်နရီ၏ စံချိန်နှင့် တူညီစွာ ရပ်တည်နိုင်ခြင်း အတွက် ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်မိကြောင်း ရော်ဘင် ဗန်ပါစီက ဖွင့်ဟ ၀န်ခံခဲ့သည်။ ပြက္ခဒိန် နှစ်တစ်နှစ် အတွင်း ၎င်းသည် ပရီးမီးယားလိဂ် သွင်းဂိုး အများဆုံး စံချိန်တွင်...
အမျိူးသမီးများအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ. အဆိုးဆုံးနိုင်ငံများ
မလွမ်းသင့် သော အလွမ်းဇာတ်များ...
ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံ ၏ စာစုများ
ရဟန်းတော်များ လမ်းပေါ်ထွက် ၍ ဆန္ဒပြခြင်းသည် မည်သည့်သိက္ခာပုဒ်များနှင့် ငြိစွန်း နေပါသနည်း
မေး ။……….။ တပည့်တော် ရိုသေစွာမေးလျှောက်အပ်ပါသည်ဘုရား၊ ရဟန်းတော်များ လမ်းပေါ်ထွက် ၍ ဆန္ဒပြခြင်းသည် မည်သည့်သိက္ခာပုဒ်များနှင့် ငြိစွန်း နေပါသနည်း။ ( ကိုမြင်သိန်း (စင်္ကာပူ)) ဖြေ။…………။ ဒီမိုကရေစီ မေးခွန်းဖြစ်တယ်။(ရယ်သံများ) ပက္ကာသနိယကံလုပ်တာ အခုရှင်းပြမယ်။ မြို့ထဲမှာ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ...
ကြာ... ( နန္ဒာသိန်းဇံ) သာယာသောတစ်နေ့ .. သူက အပယ်ရတနာ လိုဏ်ဂူဘုရား၏ တောင်ဘက်စင်္ကြန်နံရံရှိ ရုပ်ပုံများအကြောင်း၊ ထိုရုပ်ပုံများနှင့်အတူ ရေးခြယ်ထားသော ကြာပန်း၊ ကြာဖူး၊ ကြာရိုး၊ ကြာရွက်များအကြောင်းကို ပြောပြနေသည်။ကျွန်တော်က နားထောင်သည့်အလှည့်ချည်း ယူထားသည်။ သူက စာအုပ်ထူကြီးတစ်အုပ်ကိုဖွင့်၍...
ပည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ၂၀၁၁ ဇူလိုင် ၂၀ရက်၊ နေ့လည် ၁နာရီမှ ၄နာရီ၊ Central Hotel The Fourth Estate Symposium တွင်အော်ပီကျယ်၏ ဆွေးနွေးချက် အရင်တစ်ပတ်လောက်က မနက်ပိုင်း ရေနွေးကြမ်းဝိုင်းလေးမှာ ကျွန်တော်က “အစိုးရသစ်လည်း ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ - - -” လို့...
ဆန်း နှင့် ကြည် (ဒဂုန်တာရာ)
ဂျပန် ၀င်ရောက်လာသော ၁၉၄၂ တွင် ကျနော် ရန်ကုန်ရောက်ပါပြီ။ အင်္ဂလိပ်များထွက်ခွာပြီးနောက် ဂျပန်တို့ ၀င်ရောက် လာသည်။ ဗိုလ်မှူးရန်နိုင်က ကျနော်နှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ လုပ်ဖေါ်လုပ်ဖက်။ တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး ကို ထွန်းရှိန် သူက ‘ရန်ကုန်သိမ်းပြီးပြီဗျ၊ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်က သိမ်းတာ၊ အဲဒါ...
“တပ်တော်ဦးဆီ မျှော်လိုက်ပြန်တော့ ရဲတံခွန်တွေ လေကစား........” အထက်ပါ သီချင်းစာသားလေး ကို မြင်လိုက် ၊ တွေ့ လိုက် သည်နှင့် နတ်ရှင်နောင် သီချင်း ဆိုတာအားလုံးသိကြ...
သည်ပိုစ့်အား ဧဒင်ဥယျာဉ်မှ မဇာဇာ မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်မျှဝေပါသည်... အိုဇုန်းလွှာပေါက်ခြင်း . ကမ္ဘာမြေမှအထက် ၁၀ မိုင်မှ မိုင်၃၀...
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ စာရေးဖို့ကြိုးစားနေတာကြာပါပြီ။ တကယ်ဆိုရင်အားလုံး သိပြီးသားပေမယ့် ကျွန်တော့် စိတ်မှာ တွေးစရာလေးတွေ ဖြစ်စေလို့ရေးမိတာပါ။သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောကြရင်းသူရဲကောင်း နှင့် သတ္တိ ဟူသောအကြောင်း အရာအရောက်မှာ အငြင်းပွားခဲ...
…ရန်ကုန်မြို့၊ တာဝါလိန်း၊ အမှတ်(၂၅)ရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေထိုင်ခဲ့သောအိမ်ကို ယဉ်ကျေးမှုဌာနက “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း” ပြတိုက် အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ …ထို့ကြောင့် ရုံးအားရက် တစ်ရက်တွင် ကျွန်တော်သည် ဗိုလ်ချုပ်အိမ်သို့...
ဗိုလ်ချုပ်၏ လူသိနည်းသော အဖြစ်အပျက် တစ်ခု
ရေးသူ- သခင်တင်မြ ပြန်လည် တင်ပြသူ- အောင်ခင်မြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း (၁၉၁၅- ၁၉၄၇) -၁၉၄၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ည (ရန်ကုန်၊ ကြည်မြင်တိုင်၊ ဟုမ်းလမ်း မီးရထားဂုံးထိပ်ရှိ ဂျပန်ပြန် ရဲဘော်သုံးကျိပ် အဖွဲ့ဝင်...
ပြတိုက်ဆိုဒ်မှ ညချစ်သူ၏ပိုစ့်အားပြန်လည်တင်ပြပါသည်။............................... ................................................................................................................... စာဖတ်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားလေးစားသော ဆရာချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)...
ONLINE CASINO VISA, BESUCHERZäHLER KOSTENLOS, ONLINE CASINO IN HONG KONG, EUROPA CASINO, Casino News
online ICT reader
PC world မဂ္ဂဇင်း
လူကြီးမင်း cell phone villa
Online ICT Reder